Solar Panel Manufacturers, Solar Panel Kits Suppliers, Mono Solar Panel - Haitian
Support Call + 86-577-6820 6018
Wind Solar Mbeu dzakauchikwa System
Industrial mhepo turbine 10kw-50kw goho
Micro mhepo turbine 100-1000W goho
Residential mhepo turbine 1kw- 5kw goho
PV afoot rakasungirwa inverter
PV Junction bhokisi
rezuva mundiro controller
Wind afoot pamusoro controller
Wind afoot kusingagumi inverter
Wind Solar chemasanganiswa mundiro controller
Wind rezuva chemasanganiswa afoot kusingagumi inverter
PV nokuwedzera System
Wind nokuwedzera System
Folding Lever shongwe
Guyed Wire shongwe
Kuzvipira kwedu Real Inowana Beyond Diesel & Peturu Engine
Nenyanzvi magadzirirwo kugadzira In Zvirevo Solar Energy & Wind-Solar Mbeu dzakauchikwa System.
Ningbo Haitian RENEWABLE Energy nheyo muna 2001, mumwe anotungamirira akaigadzira rezuva Photo-voltaic uye rezuva module ukama chigadzirwa dziri China. Haitian mubasa R & D uye kugadzirwa crystalline nesilicon rezuva masero uye modules. Poly-nesilicon rezuva ukomba vane zvakawanda 5 kusvika 300 W muzana panel, monkey-crystalline rezuva ukomba uyewo siyana 160-190W / 260-280W paminiti remadziro. Uye zvinhu zvedu, toenda CE, Ul, TUV zvitupa. Kunze, isuwo tinogona kugadzira uye kupa mhepo-rezuva chemasanganiswa hurongwa mhinduro here kana vanoda mune dzimwe nzvimbo ...
Residential mhepo turbine SWT5kw
modules Small CHNSW-215W-225-235-M
High-kunyatsoshanda modules CHNSW-290W-300W-60
Double-girazi modules CHNSW-320W-330W-72
Double-girazi modules CHNSW-310W-320W-72
Kwakajairika modules CHNSW-220W-250W-60
Solar PV System For Residential
Solar PV hurongwa zvinosanganisira yakasiyana zvinoriumba zvinofanira kusarudzwa maererano nehurongwa mhando yenyu, nzvimbo nzvimbo uye mafomu. The zvikuru zvinoriumba kuti rezuva PV mamiriro muri zuva mutariri controller, inverter, bhatiri bhengi, webetsero simba matsime uye mitoro (midziyo yemagetsi).
Industrial uye vezvokutengeserana dzinotenderera zuva simba hurongwa
Industrial uye vezvokutengeserana rezuva simba hurongwa chinosanganisira rezuva ukomba, hurongwa controller uye inverter. Solar paneeli ichabereka DC (Direct Current) magetsi, uye magetsi ichi richabvoora kunyange convert uye inverter kubereka AC (rakatumbuka Current) magetsi. Zvadaro simba iri kumhanya kupinda AC simba Panel shure utility makambani simba afoot. Sezvaakaita-afoot rezuva simba hurongwa anofarira zvakanakira bhatiri-vakasununguka uye vakaderera mutengo ...
mhepo dzinotenderera zuva chemasanganiswa marongedzero musha
Maererano zhinji renewable simba nyanzvi, duku "chemasanganiswa" yemagetsi hurongwa kuti rinobatanidza mhepo uye solar (photovoltaic) ruzivo inopa akawanda zvakwakanakira pamusoro kana kuroorwa system.In rakawanda nzvimbo, mhepo aimhanya vakaderera muzhizha apo zuva rikasabuda chakajeka uye chakarebesa. Mhepo iri simba munguva yechando kana zvishoma chezuva iripo. Nekuti yepamusoro kushanda nguva mhepo uye
Poland Plant 40KW PV SYSTEM
Ireland mhepo rezuva chemasanganiswa vezvokutengeserana SYSTEM
South Africa 200kw Industrial PV System
Finland 15kw Wind Solar Mbeu dzakauchikwa System
Bolivia mhepo rezuva chemasanganiswa vezvokutengeserana SYSTEM
Kana uchida maindasitiri mhinduro ... Tiri dziripo kwamuri
We zvinopa itsva negadziriso inogona kuenderera mberi. chikwata chedu nyanzvi anoshanda kuwedzera ubereke uye mutengo zvinobudirira pamusoro musika